UTalaikene unombono kwihlabathi elijikelezileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Amanqaku amabini okuphawula. Enye kukuba, ukunqongophala kwe uzihloniphile xa ungumzekeliso, umzobi okanye umzobi kwaye oko kusikhokelela ekubeni singazi ukuba singaxabisa njani into ayila ngokwenene ngezandla zabo. Okwesibini, uvakalelo lokuba ubugcisa bakho bunokubacaphukisa abanye ngokubukeka okwahlukileyo kunokwakho yinto ekufuneka izanywe, ususe uloyiko kunye nesigqubuthelo, uphume phandle.
UTalaikene unengxaki kula manqaku mabini njengomzobi i-acrylic njengesixhobo sakho sokuqikelela sobugcisa ukuphefumla ukungazinzi, iisimboli kunye neengcinga uninzi olunento yokwenza nobunzulu bomfazi. Uhlobo lwentetho eyiyo apho sinokuzibona sichukumiseka xa sijonga omnye wemisebenzi yakhe. Ukujonga okungazinzanga kunye nobunzulu ngaxeshanye.
"Imfihlelo yokuzalwa" ngu Umsebenzi oyintloko weTalaikene kule posi, kodwa inezinye ezininzi endabelana ngazo apha njengomzobi oneentloni kwaye apho ubugcisa bakhe buzalelwe abanye nangona efuna ukuzifihla ekuqaleni njengenciniba enamathele entloko emhlabeni.
Umsebenzi intle, inobuhlanga, yahlukile kunye nokomfuziselo apho iimvakalelo ezininzi kunye neembono zinokuqokelelwa khona. Kuyaphazamisa njengamanye amagcisa amaninzi akhangela i-psyche kunye nokuziphatha ngesiseko esithile ukuzama ukufumanisa abanye.
Njalo surrealism ilahlekile ukusisa phambi kweendinyana ezahlukeneyo kwaye yintoni ukukhangelwa kwesilwanyana kwizenzo zabantu abasingqongileyo. Oko kuguquka kwezi gusha zingaboniyo apho umntu anokubona ngeliso elinye, ngelixa umntu ejonge kumbukeli ngamehlo akhe amabini.
Unayo iwebhusayithi yeTalaikene kweli qhagamshelo. Umsebenzi okhethekileyo Kuya kufuneka uthathe ixesha elifanelekileyo lokufumana oko asinika kona kunye nokuba uziva njani xa uphambi komnye wemisebenzi yakhe.
Ngaba uza kuluma Isikhokelela kulolo xhala kodwa malunga ne-hyperrealism.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukujonga okukrakra kukaJolanta Talaikiene